I-Body-Worn Camera Technological Innovation Kuyo Yonke Iminyaka - Izixazululo ze-OMG
Phakathi kwamagajethi amaningi we-elekthronikhi esiwasebenzisa nsuku zonke, ngokungangabazeki amakhamera aphakathi kwezithandwa kakhulu. Ukusuka kuma-Smartphones kuya kuma laptops kuya ezinhlelweni zokuphepha ekhaya, yonke into inekhamera encane. Ngenkathi injongo eyinhloko yamakhamera ukuqopha izinkumbulo esizithandayo kakhulu noma izinto ezisithandayo, ezinye zenzelwe imisebenzi ethile. Isibonelo sokuqala i-body-cam, noma amakhamera agqokwa noma abambelele emzimbeni.
Njengoba igama libonisa, ama-body-cam enzelwe ukuthi abekwe kithi. Abasebenzisi abazisebenzisa kakhulu ngamaphoyisa aseMelika noma abasebenzi bezomthetho, abazisebenzisayo ukuqopha umlando wezinsolo nobufakazi. Ama-cams ezenzo ngezinye izinhlobo zamakhamera angagqokwa emzimbeni futhi akuvumela ukuthi urekhode imisebenzi yomuntu siqu. Lokhu kubuye kubenze bakulungele ukubloga kwevidiyo noma ukudubula kwezemidlalo.
Eminyakeni eminingana edlule, ubuchwepheshe buhlanganiswe namasu amasha nentuthuko emkhakheni wamaphoyisa nezokuphepha sekuchaze kabusha izici eziningi zamaphoyisa nezinsizakalo zokuphepha. Ngokuyinhloko ukubona ubuchwepheshe njengokwelulwa komthetho ukuze kusetshenziswe udlame olufana nokusetshenziswa kwama-TASERs - njengokuhlolwa kwe-DNA (Roman, 2008) - kanye nendlela yokwenza ngcono ukusebenza kahle kwezinsizakalo enikezwa ngamaphoyisa maqondana nokutholwa kobugebengu ngokuhambisana nemodeli yokuqagela yamaphoyisa (Intelligence-Led) - Ubuphoyisa) kanye nemininingwane yokuphatha (njengokuhlaziywa kweHot Spots okwenziwe yiCrimeView ngokusebenzisa iPOL Police Information System).
Ubuchwepheshe busetshenziswe kakhulu njengezindlela zokuqapha nokuqapha izakhamizi ezejwayelekile kanye namaphoyisa. Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1990s emaphoyiseni ahlukahlukene ase-US, amakhamera agqitshwa kumakhamera wevidiyo ezimotweni kwavela njengendlela entsha yokuqopha ukuxhumana ngesikhathi sangempela phakathi kwamaphoyisa kanye nezakhamizi (Pilant, 1995).
Ngaphandle kokuphikiswa kwangoko okuhlinzekwe ngamaphoyisa kula makhamera (Pilant, 1995), ucwaningo lukhombisile ukuthi bawukhulisile umuzwa wokuphepha ukuthi amapholisa azizwe enza imisebenzi yawo, ekhulisa ukuziphendulela nokungafihli engcupheni yamaphoyisa nawo. kanye nokwehlisa noma yisiphi isikweletu emaphoyiseni. Ngenxa yalokhu, lobu buchwepheshe buyemukelwa kabanzi futhi bamukelwa ngabaphathi bezomthetho base-US (IACP, 2003).
Ngakolunye uhlangothi, izinhlelo ze-CCTV sezidume kakhulu phakathi kweziphathimandla ezihlukene zasendaweni nezomthetho njengoba zinikeza ukubukwa okubaluleke kakhulu kokuqapha nokuvimbela, njengokuvimbela ubugebengu ngokujwayelekile nanjengethuluzi lokuphenya kwamaphoyisa.
Kuyiqiniso, ukwanda nokwanda kwama-Smartphones (anekhamera eyakhelwe ngaphakathi nekhamera yomsindo) kule nkathi yesimanje yedijithali kuye kwandise kakhulu ikhono lokuqopha imicimbi njengoba yenzeka, ikakhulukazi ngesikhathi sokuxhumana kwamaphoyisa nezakhamizi. Ngenxa yalokhu, ukuqoshwa kwevidiyo nokulalelwayo sekube yingxenye ebanzi yempilo yekhulu le-21st.
Yini ama-body Worn Camera-BWCs?
Ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kwakamuva emkhakheni wezokuphathwa komthetho emkhakheni wokubhekwa kubalwa amakhamera agqokwa ngamaphoyisa nonogada abazimele ngenkathi kwenziwa umsebenzi (amaphoyisa aboshwe ngamakhamera). Ubuchwepheshe bokusebenzisa la makhamera bulula kakhulu futhi buzochazwa ngokuhamba kwesikhathi.
Ikhamera ephethwe ngamaphoyisa noma unogada (okuyithuluzi elincane elingaqopha izithombe nomsindo) iqopha ukusebenzisana nokuxhumana kwephoyisa noma unogada nezakhamuzi, isisulu noma umenzi wobubi bobugebengu. Ividiyo nomsindo othathwe ngamakhamera aphathekayo asetshenziswa ngabaphathi bezokuphepha nezinsizakalo ukuhlinzeka sobala ebudlelwaneni babo nomphakathi lapho ekugcineni bezophendula khona.
Ngabe isebenza kanjani ikhamera ephathekayo?
Lobu buchwepheshe busebenzisa ikhamera efakwe esiqwini noma emzimbeni wephoyisa noma konogada. Ikhamera ephathekayo ivikeleke ngentambo evela entanyeni yesikhulu samaphoyisa noma ifakwe ephaketheni noma kukhola womfaniswano wephoyisa. Kungafakwa ngisho nasezibukweni zelanga ezigqokwa yiphoyisa. Ngokuvamile, noma kunjalo, ikhamera ephathekayo ibekwe ezindaweni eziphakeme zomzimba ukuze inikeze ukubukwa okuhle lapho kuqoshwa ividiyo nomsindo.
Lobu buchwepheshe bungathatha izithonjana zevidiyo nezomsindo. Lokhu kumvumela ukuthi abhale phansi lokho okubonwa yisiphathimandla ngesikhathi sokuhamba kwakhe futhi ngenxa yalokho aqopha konke okwenziwayo phambi kwakhe nanganoma ngubani ahlangana naye. Amandla okuqopha angakhawulelwa kusuka emahoreni ambalwa kuya kumahora we-14. Kunamakhamera amaningi aphathekayo ahlukahlukene agqokwa umfaniswano wamaphoyisa, kufaka phakathi iPanasonic, VIEVU, TASER International, WatchGuard, kanye neWolfcom Enterprise. Izindleko zekhamera enjalo zingasukela ku- $ 200 ziye ku- $ 1000, okusuka ku- $ 185 kuya ku- $ 925.
Amakhamera aphethwe ngesandla angafaka izinketho eziningi, njengezilawuli zekhamera esebenziseka kalula, njengokucindezela inkinobho yokuqopha, izilawuli zesikrini sokuthinta, ividiyo, nokusakazwa komsindo nokubuka kuqala amandla, nokudlala kabusha khona manje ngesikrini esingahlanganiswa . Ividiyo efakwe kumakhamera ilandelwa ngedokodo lekhamera kudivayisi yokugcina yendawo (ngokwesibonelo iseva yendawo kunethiwekhi yangaphakathi) noma ngeplatifomu yesitoreji yemithombo yedijithali ekwi-inthanethi lapho idatha ingafakwa ngemfihlo futhi ilawulwe. Amanye amamodeli avumela ividiyo ukuthi ilayishwe ngenkathi iphoyisa selivele lisemkhakheni wokusebenza.
Ubuchwepheshe bokusebenzisa amakhamera aphathekayo bufaka izinto eziningi, ezahlukile phakathi kwabakhiqizi abahlukahlukene bamakhamera anjalo njengoba sekushiwo. Isibonelo, uhlelo lwe-TASER International olubizwa nge-AXON lubandakanya-
Ikhamera encane egqoke umfaniswano wamaphoyisa (kungaba ngesigqoko noma kwikhola yehembe noma izibuko) eqopha lokho okubonwa iphoyisa,
Idivayisi encane (isibonelo i-Smartphone Laptop) lapho kugcinwa khona ividiyo futhi
Ibhethri elihlala cishe amahora angama-12 kuya emahoreni e-14 futhi lifaka ukushintshwa kwamandla ekhamera ukunika amandla ikhamera ukuthwebula isithombe samaphoyisa ngokuzithandela.
Uhlelo lwe-AXON luyeza nesethi yokugcinwa kwedatha esekwe efwini lapho iphoyisa-ukuphela noma iphoyisa libeka okuqophayo edokini bese kuthi isitoreji sewebhu ngakwelinye icala, i-VIEVU ihambise uhlelo lwekhamera uhlelo oluzimele Idivaysi enamakhompiyutha aphathelwa yimizimba yayo ebandakanya ikhamera yevidiyo neyomsindo nokuhanjiswa okususelwa efwini kanye nokugcinwa kwedatha. okulayisha futhi kulayishwa ngokuphepha kuwo wonke amavidiyo aqoshwe database.
Ngakolunye uhlangothi, i-VIEVU ibaphethe uhlelo lwekhamera luhlelo oluzimele olunethuluzi elihlanganisiwe elenziwa ngamaphoyisa emizimbeni yazo okubandakanya ikhamera yevidiyo nokulalelwayo kanye nokuhanjiswa okwenziwe ngamafu nokugcinwa kwedatha.
Ukubuka okuphelele kwe-6079 Ukubuka kwe-7 Namuhla